Iifayile zeHuawei zinelungelo elilodwa lomenzi echaza enye indlela enotshi | I-Androidsis
Iifayile zeHuawei zichaza ilungelo lazo lomenzi ngokuchaza inotshi yesikrini
UAron Rivas | | Huawei, Izaziso
Kwilinge lokubonelela abathengi ngee-smartphones ngesixa esincinci se-bezels ezijikeleze isikrini, ii-OEMs zamkele iindlela ezahlukeneyo zoyilo lokuqala.
Inotshi lolona khetho luthandwayo namhlanje, njengoko isinika umlinganiso ophezulu wescreen, ngaphandle kwento yokuba ayimnandanga kakhulu kubasebenzisi ... ubuncinci ayililo inani elibalulekileyo kubo. Uninzi lwabalandeli alunakukhetha ukuba lunefowuni nenotshi. Kodwa, njengokuba izikrini zokubhoboza imingxunya okanye iikhamera ze-selfie sele zikhona kwezinye izixhobo, IHuawei isebenza ngenye indlela entsha kwinotshi enokuqala kwezinye zeemodeli zayo.
Ikhamera ezivelelayo yenye yezona zinto zinomdla ukunqanda ukusikwa kwesikrini "okucaphukisayo" okucaphukisa umsebenzisi ongaphezulu komnye, kwaye inkwenkwe iya isiba yinto edumileyo kumzi mveliso ngesantya esiphezulu. Nangona kunjalo, abavelisi kufuneka bajongane nemiceli mngeni yokuba noyilo olushenxisayo loomatshini oluphakamisa inkxalabo malunga nokuqina.
Ilungelo elilodwa lomenzi weHuawei elidlula inotshi yesikrini
IHuawei inokuba nenye indlela enokubakho kwinotshi engabandakanyi ukusetyenziswa kwe-pop-up okanye ikhamera ye-selfie, kwaye ayibandakanyi ukubetha kwiscreen.
I-smartphone, njengoko kucacisiwe kuxwebhu lwelungelo elilodwa lomenzi, inomboniso ongenabungqina odityaniswe yi-chin encinci kunye ne-bezels esecaleni. Ngazo zonke iiakhawunti, I-Huawei iyadlala kunye nokwenzeka kwe-bezel ephezulu.
Umda ophezulu ujijekile kwipateni efana noyilo oluboniswe kwezinye ii-mobiles zeMeitu. Ijika elingaphandle lenza indawo eyaneleyo yokufaka ikhamera ye-selfie kunye nesithethi esamkelayo somsindo. Nangona kunjalo, uyilo alukhangeleki lukhangeleka. Ngapha koko, isenokungcamla okrakra kancinci, njengoko inomoya wakudala.
IHuawei ithweswe isithsaba njengenkokeli kwimakethi yethebhulethi ye-Android
Uyilo lukaHuawei izakusetyenziswa, kulo lonke ulwazelelo, kuphela kwicandelo elisezantsi kunye neliphakathi kuluhlu xa ukulungele ukuthengisa. Ngayiphi na imeko, xa unikwe ukuba esi sicwangciso sisisiseko selungelo elilodwa lomenzi kweli nqanaba, akukho siqinisekiso sokuba ingxilimbela yezobuchwephesha iya kuze ikhuphe ifowuni ngolu hlobo loyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iifayile zeHuawei zichaza ilungelo lazo lomenzi ngokuchaza inotshi yesikrini
Uyikhetha njani imixholo oza kuyilandela kuGoogle Ukufumanisa
I-CameraX yi-API entsha kaGoogle yabaphuhlisi eyenza izinto zibe lula